» SAADAAL: Yaa noqon doona M/weynaha Cusub ee Soomaaliya?…Badweyntimes.com
SAADAAL: Yaa noqon doona M/weynaha Cusub ee Soomaaliya?…
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhacaya doorashada madaxweynaha Soomaaliya, waxaana socda loolan adag, hase yeeshee waxay guusha isugu soo biyo shuban doonta inay raacdo musharax kasta oo ay isku biirsadaan dhowr xaalaad.
Musharaxiinta maanta tartamaya waxaa ugu cad cad uguna taageero badan Xasan Sheekh, balse su’aashu waxay ay ka taagan tahay in xildhibaanada uu haysto ay ku filan yihiin inay guul u horseedaan.
Xasan Sheekh wuxuu u baahan yahay saddex meelood laba meel xildhibaanada (220) si uu tartanka ugu guuleysto wareegga koowaad, taasi oo u muuqata mid caqliga ka baxsan oo aan dhici doonin.
Sidaas darteed, shaki kama taagna in doorashada ay gaari doonta wareegga labaad, lagana yaabo inay usii gudubto wareegga sadeexaad, markaasi oo ay noqon doonto in lagu kala adkaado 50%+1 (165) cod.
Haddaba waxaan la hadalnay xildhibaano dhowr ah iyo siyaasiyiin ku sugan Muqdisho, si aan u ogaano halka la kala joogo, waxaana idinla wadaageynaa xogta aan helnay iyo xaaladaha Xasan uu ku badin karo iyo xaaladahaa looga adkaan karo, maadaama aysan su’aal ka taagneyn inuu wareegga labaad u gudbi karo.
1-Haddii wareega u dambeeyey ay isku soo haraan Xasan iyo Cumar Cabdirashiid, waxaa guuleysanaya Xasan, sababta oo ah xildhibaanada uu haysto oo ka badan kuwa Cumar iyo xaqiiqda ah in xildhibaanad is-beddel doonka aysan kala jecleyn Xasan Sheekh iyo Cumar Cabdirashiid.
2 – Haddii ay isku soo haraan Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, waa haddii Shariif uu soo dhaafo wareegga koowaad, waxaa ay u badan tahay in Shariifka uu adkaado dhowr sabab dartood. Dhammaan xildhibaanada is-beddel doonka waxay taageeri doonaan Shariifka. Sidoo kale xildhibaano badan oo taageeraya musharaxiinta kale ayaa u midoobi doona sidii looga adkaan lahaa Xasan Sheekh.
3 – Haddii ay isku soo haraan Xasan Sheekh iyo Jabriil, waxaa adkaan doona Jabriil. Waxaa Jabriil saacidi doona sababo la mid ah kuwa saacidaya Shariifka.
4 – Haddii ay isku soo haraan Xasan Sheekh iyo Farmaajo, waxaa adkaan doona Xasan Sheekh. Inkasta oo laga yaabo in Farmaajo uu taageero ka helo xildhibaanada musharaxiinta kale, waxaa caqabadda ugu weyn uu kala kulmi doonaa xildhibaanada Puntland ee beesha Majeerteen iyo kuwa Dhulbahante. Beelaha Dir iyo Digil iyo Mirifle, waxay u huban yihiin Xasan, halka Farmaajo uu filayo inuu qeyb weyn ka helo xildhibaanada Hawiye.
Si kastaba, Majeerteen waxay kasoo horjeedaan in Farmaajo guuleysto, sababta oo ah waxay taas ka dhigan tahay inay waayi doonaan xilka madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha labadaba. Haddii Cumar Cabdirashiid uu arko in Farmaajo uu soo baxay, waxa uu taageeradiisa u wareejin doonaa Xasan Sheekh, taasi oo Farmaajo meel cidlo ah kusoo ridi doonta.
Waxaan saadaalinay shan ka mid ah musharaxiinta ugu cad-cad, waxaase suurta gal ah in intoodaba uu kasoo hoos baxo qof aan la fileyn, inkasta oo hadda aysan muuqan wax saansaan ah oo arrintaas muujinaya.
« Warbixinta Ka HoreysayDEG DEG: Raxan Xildhibaano ah oo ka Goostay Xasan sh, & Waji Cusub oo…
Warbixinta Xigto »XOG: Wax badan ka Ogaaw Xildhibaanada Ugu Codka Qaalisan & Maamulka ay matalaan…